Equitee Myanmar အကြောင်း
Welcome To Equitee Myanmar for Life Style... Equitee Myanmar is one of fashion retailers with three brands (Equitee, 2Angels and Angel's KID) selling in local markets through its online platform and its own sales channels in Myanmar. We started out asasmall home business in workshops making women's clothing in 2015. By working closely together as single company focused on the key elements of fashion production - design, manufacture, distribution and retail - we brought our customers closer than ever the products they wanted at affordable prices.
Customer တွေစိတ်ကျေနပ်မှုရစေမယ့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး၊Customer တွေရဲ့အားပေးမှုဟာကျွန်ုပ်တို့Society ကိုကောင်းကျိုးတွေအဖြစ်တန်ပြန်သက်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
“2Angel” Fashion Brand ဟာသက်ကြီးပိုင်းမြန်မာအမျိုးသမီးများအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့Brand ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်တာဖြစ်လို့မြန်မာ့ရာသီဥတု၊မြန်မာ့လူနေမှုပုံစံတို့နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
“Angel's KID“ brand ဟာအသက်၈နှစ်မှ၁၄နှစ်အရွယ်ကလေးများအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့Brand ဖြစ်ပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးလွတ်လပ်ပေါ့ပါးမှုရစေမယ့်ပိတ်သားအမျိုးအစားများနဲ့ရွေးခြယ်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
APK ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ (2.0.3)
Equitee Myanmar အကြောင်း (current)
ပို့ဆောင်ခြင်း ပေါ်လစီ (current)
ပစ္စည်းများကို သင်အကြိုက်ဆုံးစာရင်းသို့စတင်ထည့်ရန် ပစ္စည်းများကိုသင်၏လှည်းသို့စတင်ထည့်ရန်